Madaxweynaha Puntland oo magacaabay agaasime ku-xigeenka nabadsugida Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo magacaabay agaasime ku-xigeenka nabadsugida Puntland
August 4, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali. Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magacaabay agaasime ku-xigeenka nabadsugida Puntland.
Digreetada Madaxweynaha oo ku taarikhaysnayd 30 July, 2016, ayaa lagu magacaabay Cabdinuur Maxamed Diiriye agaasime ku-xigeenka nabadsugida dowlada Puntland.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Xaashi Aadan Cilmi u magacaabay taliyaha nabadsugida gobolka Mudug, sida ku qoran digreetada Madaxweynaha.
July 6, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland oo salaada Ciidul Fidriga ku oogay garoonka kubada cagta Cawaale ee Gaalkacyo